Maxkamadda ciidamada oo xukuntay eedaysaneyaal Shabaab ah - Halbeeg News
MUQDISHO (HALBEEG)​ – Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa xukuntay labo eedaysane oo ka tirsan Ururka Al shabaab.
Labada eedaysane oo lagu kala magacaabo Cabdi Salaad Nuur iyo Gacal Maxamad Cali, waxay xeer ilaalintu kusoo oogtay dambi ah in ay xubno ka yihiin amniyaadka Al shabaab, una qaabilsan yihiin dhanka sahaminta.
Salaad oo ciidamada ammaanku gacanta kusoo dhigeen February 13, 2018, wuxuu si gaar ah ugu eedaysnaa in uu wax ka ogaa weerar fashilmay oo Al shabaab sannadkan horraantiisii kusoo qaadday Villa Somalia.
Gacal oo isna lasoo qabtay April 18, 2018, wuxuu ku eedaysnaa in uu ka tirsan yahay amniyaadka Al shabaab islamarkaana uu xiriir saaxiibtinimo iyo mid wada shaqayneedba la lahaa eedaysanaha koowaad.
Guddoomiyaha Maxkamadda Darajada Koowaad ee Ciidamada Qalabka Sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ugu dambayntii ku dhawaaqay go’aanka maxkamadda, isagoo sheegay in Cabdi Salaad Nuur lagu xukumay 8 sano oo xarig ah, Gacal Maxamed Calina lagu xukumay 3 sano oo xarig ah.
Maxkamadda ayaa u qabatay labada eedaysane muddo bil ah, taasoo ay fursad u haystaan in ay rafcaan kaga qaataan xukunka lagu riday.
MANDHEERA: weerar lagu dilay labo macallin oo Kenyan ah